Cumar Xamaami oo lagu Dilay Somalia
Cumar Xamaami oo ah Mareykan ka baxay Alshabaab ayaa la sheegey in ay dileen maleeshiyaad ka tirsan ururkaas.
ilo wareedyo ayaa u sheegey VOAda in Omar Xamaami uu dhintey saaka oo khamiis ah, ka dib markii ay maleeshiyaad hubeysan soo weerareen goob uu ku dhuumaaleysanaayey oo ku taala duleedka Baardheere.
maleeshiyadan ayaa dishey sidoo kale laba qof oo uu ku jiro Osama Al Britaini oo ah muwaadin British ah balse asal ahaan ka soo jeeda Pakistan.
Al Amriki oo ahaa 29 jir ayaa u sheegey VOAda todobaadkii hore inuu xariga u jarey Mokhtaar Abu Zubeyr, isagoo sheegey in uusan raaceynin shuruucda asaasiga ah ee Islaamka.
waxuuna ku eedeeyay hogaamiyaha al-Shabab inuu u soo jeestay inuu cadiidiyo muslimiinta si uu isagu u maamulo Somalia. Al Xamaami ayaa sheegey in Alshabaab ay isku dayeyso in ay disho isaga, isagoo sheegey inuu wali isku arko inuu yahay argagixiso.
Al xamami oo ay Alshabaab dhexdeeda looga yaqaano Al Amriki ayaa u safrey Somali sanadkii 2006da ka dib markii ay xoogaga Ethiopia faragalinta ku sameeyeen Somalia, waxa uu ku biirey ciidamda furimaha ka dagaalama , isagoo noqdey hogaamiye ka tirsan ALshabaab.
Mareykanka ayaa Xamamai dul dhigey 5Million oo doolar cidii keenta warbixin lagu soo qaban karo.
Omar Shafik Hammami, waxa uu ahaa muwaadin Maraykan ah horeyna u degganaa Gobolka Alabama. Maraykanku waxay ku dareen liiska dadka ay sida aadka ah u doonayso hay’adda FBI-da bishii Noovember sanandkii 2012-ka waxaana lagu eedeeyey inuu halis ku ahaa nabadda iyo degganaanshaha Soomaaliya iyo wakiil ahana ugu hadlay al-shabab isgaoo taageerana u fidiyey.
Dawladda Maraykanka ayaa Cumar Xamaami u tixgelinaysay inuu yahay argagxiso, waxayna madaxiisa saartay lacag 5 milyan oo dollar ah.
waxeyna ka bixisay Jawaabtan markii uu ku sheegay Xamaami wareysigii ay VOAda la yeelatay inuu ka baxay al-Shabab sidan
Hoos ka aqri Qoraalka Jawaabta Mareykanka
Hadii aad rabtid inaad Aqriso warbixintan oo English ah guji Linkiga hoose.
See below links including Interview with Omar Hammami by Harun Maruf of the VOA Somali Service.The interview was conducted on September 3, 2013.
Interview with Omar Hammami by Harun Maruf
Dhageyso Faaqidaaddii baxday (09-06-2013)